လက်ကား CAS 10418-03-8 ခံတွင်း anabolic steroids Stanozolol Winstrol ဖြတ်တောက်ခြင်း သံသရာ ထုတ်လုပ်သူ နှင့် ထုတ်လုပ်သူ |Taigui
CAS 10418-03-8 ပါးစပ် anabolic steroids Stanozolol Winstrol ဖြတ်တောက်ခြင်းသံသရာ
နာမည်အရင်း- Stanolone;ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဟော်မုန်း testosterone;အထီး enol ketone;dihydrotestosterone;dihydrotestosterone;5A dihydrotestosterone;Stanolone (စတီရွိုက်)5 အယ်ဖာ dihydrotestosterone;Stanolone hydrogenation testosterone;အထီး enol keto / dihydrotestosterone
မဂ္ဂါဝပ် : 290.44
အရည်ပျော်မှတ်: 178-183 ℃
အသုံးပြုမှု- Anabolic စတီးရွိုက်။အမျိုးသား hypogonadism နှင့် သုတ်ပိုးမျိုးမပွားနိုင်ခြင်းကို လျှော့ချရန်အတွက် ထိန်းချုပ်ထားသော အရာဖြစ်သည်။
1. ဝှေးစေ့မှလျှို့ဝှက်သောအဓိကအန်ဒရိုဂျင်သည်ဟုတ်ပါတယ် testosterone ။
2. သို့သော်၊ ခန္ဓာကိုယ်အများစုတွင်၊ androgenic လက္ခဏာကို Testosterone ဖြင့်မသယ်ဆောင်ပါ။
3. ဦးနှောက် (CNS) ၊ အရေပြား၊ လိင်အင်္ဂါများ ပါ၀င်သော ဤတစ်ရှူးများတွင် လက်တွေ့အားဖြင့် ကြွက်သားမှလွဲ၍ ကျန်အရာအားလုံး - တက်ကြွသော အန်ဒရိုဂျင်သည် အမှန်တကယ်တွင် dihydrotestosterone (DHT) ဖြစ်သည်။
အထုပ် 1kg/လူမီနီယမ်သတ္တုပြားအိတ် သို့မဟုတ် လိုအပ်သလို
အသုံးပြုမှု ဆေးဝါးပစ္စည်းအဖြစ် သုံးနိုင်သည်။
အနည်းဆုံး မှာယူမှု ပမာဏ 10g
passment ပက်ကေ့ချ်နှင့် ပို့ဆောင်မှုအတွက် အထူးကျွမ်းကျင်သောအဖွဲ့သည် ငေးစိုက်ကြည့်နေသည်။
ခြေရာခံကုဒ်ပေါ်တွင် 24 နာရီအကောက်ခွန်ဖြတ်သန်းမှုအတွက်အာမခံပါသည်။
ပို့ဆောင်ရေး ဦးဆောင်ချိန် ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက် 24 နာရီအတွင်း
ငွေပေးချေမှုရွေးချယ်စရာများ Western Union၊ MoneyGram၊ T/T၊ ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်း။
သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း 1) DHL၊ EMS၊ Fedex၊ HKEMS၊ TNT၊ UPS ဖြင့် အမြန်ပို့ဆောင်ခြင်း။
(ငွေလွှဲပြီး 24 နာရီအတွင်း နေ့ချင်းပြန်ပို့ပေးပါတယ်)
2) ပင်လယ်အားဖြင့် (အရေအတွက်အားဖြင့် 30-45 ရက်ကြာလိမ့်မည်)
Supply နိုင်ခြင်း 500kg/လ
Stanolone ကို နာတာရှည် လေလွင့်ရောဂါ၊ အရိုးပွရောဂါ၊ ပြင်းထန်သော ပိုးဝင်ခြင်းနှင့် မီးလောင်ဒဏ်ရာများ စသည်တို့တွင် အနုတ်လက္ခဏာနိုက်ထရိုဂျင်ဟန်ချက်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော၊ အရွယ်မတိုင်မီ မွေးကင်းစကလေးများနှင့် အရွယ်မရောက်သေးသော ကလေးငယ်များ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း စသည်တို့အတွက် အသုံးပြုပါသည်။ အရိုးကျိုးခြင်းသည် ပျောက်ကင်းရန် မလွယ်ကူပါ။Hypercholesterolemia နှင့် မီးဖွားပြီးနောက် စိတ်ကျရောဂါ ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
စမ်းသပ်မှုများ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုစံနှုန်း ရလဒ်များ
အရည်ပျော်မှတ် 176~181ºC 176.5~181ºC
ဖော်ပြချက် အဖြူရောင် သို့မဟုတ် လက်တွေ့အားဖြင့် အဖြူရောင် ပုံဆောင်ခဲမှုန့်
အတိအကျလှည့် +25°~ +31° +25.9°
အခြောက်ခံခြင်းတွင် ဆုံးရှုံးမှု ≤0.5% 0.36%
ဆန်းစစ်ချက် ≥97% ၉၈.၁%
နိဂုံး လုပ်ငန်းစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိပါစေ။
Stanolone ကို နာတာရှည် ဖြုန်းတီးသောရောဂါ၊ အရိုးပွရောဂါ၊ ပြင်းထန်သော ကူးစက်မှုနှင့် စိတ်ဒဏ်ရာ၊ မီးလောင်ဒဏ်ရာ၊ စသည်တို့ကြောင့်ဖြစ်သော အနုတ်လက္ခဏာနိုက်ထရိုဂျင်ချိန်ခွင်လျှာ၊ အရွယ်မတိုင်မီ မွေးကင်းစကလေးငယ်များနှင့် အရွယ်မရောက်သေးသော ကလေးငယ်များ ကြီးထွားလာမှု စသည်တို့အတွက် အသုံးပြုပါသည်။ အရိုးကျိုးခြင်းသည် သက်သာပျောက်ကင်းရန် မလွယ်ကူပါ။Hypercholesterolemia နှင့် မီးဖွားပြီးနောက် စိတ်ကျရောဂါ ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
1. Stanolone အား နာတာရှည် အလဟဿဖြစ်သော ရောဂါ၊ အရိုးပွရောဂါ၊ ပြင်းထန်သော ရောဂါပိုးများနှင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဒဏ်ရာများအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။အနုတ်လက္ခဏာနိုက်ထရိုဂျင်ဟန်ချက်ကို လောင်ကျွမ်းစေပါသည်။
2. Stanolone သည် လမစေ့ဘဲ ကလေးများနှင့် အရွယ်မရောက်သေးသော ကလေးများ၏ ကြီးထွားမှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည် ။Stanolone လုပ်နိုင်ပါတယ်။အရိုးကျိုးခြင်းကို ကုသခြင်း ၊ hypercholesterolemia ၊ မီးဖွားပြီးနောက် အားနည်းခြင်း တွင်လည်း အသုံးပြုသည်။
3. Stanolone သည် DHT ဖြစ်သည်။အတော်များများက ခန့်မှန်းထားသလောက် ပြဿနာမဟုတ်တာထက် ပိုကောင်းဖို့၊ အနည်းဆုံးတော့ အလယ်အလတ်ပါ။ဆေးများ။ဥပမာအားဖြင့် 100-200 mg/week ကို stack ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ စဉ်းစားကြည့်မယ် ၊အခြေခံ သို့မဟုတ် တစ်ခုတည်းသော စတီရွိုက်ကို အသုံးပြုသည်။ထိုးဆေးအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းဆုံး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ လေ့လာမှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
ခံတွင်းဇီဝရရှိနိုင်မှုမှာ အလွန်နည်းပါသည်။ ပရိုပီနိတ်မှုန့်ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
ပါးစပ်ဖြင့်သုံးလျှင် အသည်းခြောက်ခြင်း မရှိနိုင်ပါ။ကြမ်းတမ်းမှု လုံးဝမရှိပါ။
ယခင်- Anadrol Oral Anabolic Steroids Oxymetholone CAS:434-07-1 ဖြင့် ပိန်ကြုံးသောကြွက်သားကိုယ်ထည်ကို ရယူပါ။
နောက်တစ်ခု: Avodart / Dutasteride အော်ဂဲနစ် - ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း ဆန့်ကျင်ဘက် စတီရွိုက်အစိမ်းမှုန့်
Anadrol Oral Anaboli ဖြင့် ပိန်သောကြွက်သားကိုယ်ထည်ကိုရယူပါ...